Rainow, Author at Cele Gabar - Page 18 of 60
ယောက်ဖဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင်ရဲ့ အချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆေးထိုးလိုက်တဲ့ ဦးဇေသီဟ
October 2, 2020 - by Rainow
နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဇေသီဟကတော့ လတ်တလော Stay Home ကာလကို မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေအတွက် ရယ်စရာဟာသပို့စ်လေးတွေတင်ပေးရင်း ဖြတ်သန်းနေသူပါ။ ယောက်ဖဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင်ကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို ဆေးထိုးလေ့ရှိသူဖြစ်ပြီး ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း စိန်ဖြိုးလှိုင်နဲ့ ရီရီပွင့်ဖြူတို့နှစ်ယောက် ချစ်သူမဖြစ်ခင်တုန်းက အကြောင်းတွေကို အမှတ်တရအနေနဲ့ မျှဝေလာပါတယ်။ ” စိန်ဖြိုးနဲ့ ကျွန်တော်စသိတာ သူ (၁၀) တန်းတောင်မအောင်သေးဘူး။ ယောက်ဖလောင်းလျာကို ဂိမ်းဆိုင်ခေါ် ဂိမ်းတွေဆော့ပေါ့။ အဲ့ဒီအချိန် …
ကိုဗစ် ကာကွယ်ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ သုသု
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုဗစ်ကာကွယ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အစိုးရကသာမက ပရဟိတသမားတွေကပါ အင်တိုက်အားတိုက်ကူညီနေကြသလို ငွေကြေးတတ်နိုင်သူတွေကလည်း ငွေအားနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူညီပြီး ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကို တိုက်ထုတ်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေကြတာကတော့ တကယ်ကို အားရစရာပါ။ ဒါ့အပြင် တနေ့တနေ့ လှူဒါန်းကြတဲ့အထဲမှာ ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တွေ အများဆုံးပါဝင်လာကတော့ အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုပါ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စေမှာ အမှန်ပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ ထိပ်တန်းမိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်သလို ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်တဲ့ သုသုကတော့ Fortune Plaza We Love Yangon …
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးလမှာ အလှူတွေဆက်တိုက်လုပ်ပေးနေတဲ့ စမိုင်းလ်
ကုသိုလ်ရေးအတွက်ဆို လက်မနှေးတတ်သူစမိုင်းလ်ကတော့ လတ်တလောမှာလည်း ကိုဗစ်ကုသကာကွယ်ရေးအတွက် လိုအပ်တာတွေ ဆက်တိုက်လှူဒါန်းနေသလို ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးလမှာလည်း အလှူတွေခပ်စိတ်စိတ်ပြုလုပ်လာတာကို တွေ့မြင်ရမှာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကလည်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့မွေးလမှာ အလှူတစ်ရက်မပျက်လုပ်ခဲ့သလို အခုနှစ်မှာလည်း လအစကတည်းက အလှူပြုလာတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုပြည့်မောင်ရဲ့မွေးလ ပထမဆုံးအလှူအဖြစ် (၁၀) တန်းတက်ဖို့ ခက်ခဲနေတဲ့သမီးလေးကို ထောက်ပံ့ငွေ(၅) သိန်းလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ တစ်ရက်တည်းမှာပဲ နောက်အလှူတစ်ခုအနေနဲ့ ကိုပြည့်မောင်ရဲ့မွေးနေ့(၂၂) ရက်နေ့အထိ နေ့စဉ်လူတစ်ဦးကို (၁)သိန်းကျ (၂၂) ဦးလှူဒါန်းပေးသွားဦးမှာပါတဲ့ …
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ဒီနေ့ အောက်တိုဘာလ((၂) ရက်နေ့လေးကတော့ နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေရဲ့ အသည်းကျော် မင်းသွေးခန့်ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပါ။ မင်းသွေးခန့်ကတော့ ချစ်စရာသွားတက်လေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့အပြုံးလေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အပြင် ညို့အားပြင်းတဲ့မျက်ဝန်းတွေရဲ့ ပိုင်ရှင်ပါ။ အခုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ ပရိသတ်အားပေးမှုတစ်ဟုန်ထိုးရရှိခဲ့သလို မင်းသွေးခန့်ရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုလည်း ဆက်တိုက်ဆိုသလို တွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မင်းသွေးခန့်ရဲ့မွေးနေ့လေးမှာတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် ပါပါးအားတီက မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ “Happy Birthday ” Min Thway Khant ” ရေ… …
လစာပေးရမယ့်နေ့ကို ကတုန်ကရင်နေ့စွဲမဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
October 1, 2020 - by Rainow
ခိုင်နှင်းဝေရင်သွေးလေးများဂေဟာရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်မင်းသမီးခိုင်နှင်းဝေကတော့ မိဘမဲ့ကလေး(၃၅) ယောက်ကို မိခင်အရင်းတစ်ယောက်လို ရင်အုပ်မကွာစောင့်ရှောက်ပေးနေသူပါ။ အလှူရှင်တွေနဲ့သာ အဓိကရပ်တည်နေရတဲ့ဂေဟာမို့ အခုလိုကိုဗစ်ကာလ လူတိုင်းခက်ခဲနေပြီး အလှူရှင်ရှားပါးနေတဲ့အချိန်မှာလည်း ကလေးတွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို လစာပေးရက်မှာလည်း ကတုန်ကရင်နေ့စွဲမဖြစ်အောင် ကြိုးစားနေပါတယ် တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ.. ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါမတိုင်ခင်က လကုန်ရက်တွေဆို ဝန်ထမ်းတွေကို လစာလည်းလွယ်လွယ်ကူကူပေးနိုင်သလို ၊ ဘောက်ဆူးပေး၊ မဲဖောက်ပေးနဲ့ လကုန်ရက်လေးကို ပျော်ရွှင်စွာကုန်ဆုံးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ အဲ့လိုအချိန်တွေမရှိတော့တာတောင် ကြာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ …
လှုမှုကွန်ရက်ကို လူတိုင်းနီးပါးတွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ နာမည်နဲ့အကောင့်အတုတွေ၊ ပေ့ချ်အတုတွေဖွင့်ပြီး မသမာတဲ့နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ လုပ်စားနေကြတဲ့လူတွေလည်း အများအပြားရှိလာပါတယ်။ အနုပညာရှင်အယောင်ဆောင်ပြီး အလှူခံတာတွေရှိသလို မကောင်းတဲ့ပုံတွေတင်ပြီးတော့လည်း လူစိတ်ဝင်စားမှုရအောင် နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့လုပ်လာကြတာကို ပရိသတ်ကြီးလည်း တွေ့မြင်ကြမှာပါ။ ဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပရိသတ်အချစ်တော်ချမ်းမြေ့မောင်ချိုကတော့ အရမ်းစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ရကြောင်း ဗွီဒီယိုနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီး မောင်ချိုရဲ့ပြောစကားကိုတော့ မြန်မာအိုင်ဒေါ Winner ဆုရှင်အက်စတာကလည်း အခုလိုထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ” အဲ့အတိုင်းပါပဲ.. ချမ်းမြေ့မောင်ချို.. ကျေးဇူးပါချစ်ရယ်. အခုလိုအားလုံးကိုယ်စား …
ရင်ခုန်သံ(၇၄) ရက် ဇာတ်လမ်းတွဲအတွက် အသံသွင်းရင်း ငိုခဲ့ရတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးကို ချပြလာတဲ့ မြတ်နိုးအေး
MNTV လိုင်းက ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ ရင်ခုန်သံ(၇၄) ရက်ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကတော့ မနေ့ကပဲ ဇာတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မြင်နေကျမဟုတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းဇာတ်အိမ်လေးနဲ့ ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သလို ကိုယ့်ဇာတ်ရုပ်နဲ့ တသားကျအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ခါရာနဲ့ မြတ်နိုးအေးတို့ကြောင့်လည်း ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ပရိသတ်ရင်ထဲရောက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ မြတ်နိုးအေးကတော့ ပရိသတ်တွေရင်ထဲဆို့နင့်ပြီး ကျန်ခဲ့ရတဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရမ်းကြိုးစားထားကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရိုက်ကူးရေးရဲ့အပိုင်းတိုင်းကို သေချာဂရုစိုက်ပြီး လုပ်လာကြသလို အသံပိုင်းကိုလည်း ကြည်လင်ပြတ်သားစေဖို့ …
ပရဟိတမင်းသားကြီးဦးကျော်သူကတော့ အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာလည်း နာရေးကူညီမှုအသင်းကြီးရဲ့ တာဝန်တွေကို မနားမနေထမ်းဆောင်နေသလို ဒီတစ်ခေါက်မှာလည်း ကိုဗစ်ကာလအတွင်း ဝမ်းရေးခက်ခဲနေကြမယ့် မိသားစုတွေအတွက် ဆန်တွေလှူဒါန်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဦးကျော်ထူးဆီက ဆန်အိတ်(၂၈) အိတ်ကို ကိုယ်ပိုင်ချွေးနှဲစာနဲ့မှာယူအားပေးခဲ့ပြီး ဆန်တစ်ပြည်အိတ်တွေ ကိုယ်တိုင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆန်အိတ်တွေကိုတော့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၅) ရပ်ကွက်အတွင်းမှာရှိကြတဲ့ အခြေခံလူတန်းစားမိသားစု(၁၃၈) စု၊ စုစုပေါင်း လူဦးရေ(၆၀၀) ကျော် ကို လှူဒါန်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ.. အခုလိုလှူဒါန်းပေးတဲ့အပေါ်မှာ …
September 30, 2020 - by Rainow
ပရိသတ်ကြီးရေ ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ(၃၀) ရက်နေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၅) မိနစ်မှာ အကယ်ဒမီများရှင်မို့မို့မြင့်အောင်ရဲ့ မိခင်ကြီးဆုံးပါးသွားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အသက်(၉၉) နှစ်မှာ လူကြီးရောဂါနဲ့ဆုံးပါးသွားတာဖြစ်ပြီး အခုလို ကိုဗစ်ကာလကြီးမှာ အနုပညာမောင်နှမဖြစ်သူ မမို့ရဲ့အမေနောက်ဆုံးခရီးကို လိုက်ပါမပို့ဆောင်နိုင်တဲ့အပေါ် ရန်အောင်ကတော့ ဝမ်းနည်းကြောင်းစကား ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ” ချစ်ရတဲ့အစ်မ မမို့(မို့မို့မြင့်အောင်)ရဲ့မွေးမိခင်ကြီး ယနေ့ နေ့လည်(၁)နာရီ(၅)မိနစ်မှာ လူကြီးရောဂါနှင့်ဆုံးပါးသွားတဲ့အတွက် မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနည်းကြေကွဲရပါတယ်. ကျွန်တော့်ကို ချစ်တဲ့၊ ကျွန်တော်က …
စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းရဲ့ ဥက္ကဌဖြစ်သူ ဖိုးချစ်ကတော့ ဒီနေ့မှာ သူ့ရဲ့အသင်းအတွက် ဝမ်းသာစရာသတင်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ကိုဗစ်ကာလအခက်အခဲတွေကြောင့် မြန်မာနေရှင်နယ်လိခ် ဘောလုံးအသင်းတွေထဲက နှစ်သင်းကတော့ ပထမရာသီအပြီးမှာပဲ ဖျက်သိမ်းလိုက်တာကိုတော့ ပရိသတ်တွေလည်း သိရှိပြီးဖြစ်မှာပါ။ ဖိုးချစ်ကတော့ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဘောလုံးဝါသနာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ရုံသာမက မြန်မာ့ဘောလုံးလောကကို တိုးတက်စေချင်တဲ့စိတ်နဲ့ စစ်ကိုင်းယူနိုက်တက်ဘောလုံးအသင်းကို တည်ထောင်ထားပေမယ့်လည်း လတ်တလောကိုဗစ်ကာလမှာ အသင်းရပ်တည်ဖို့ ခက်ခဲနေတာကြောင့် ဦးဇော်ဇော်က လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း မျှဝေလာပါတယ်။ “Covid-19 ကာလတွင် …